စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > multi အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator
စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator
AOX-M စီးရီး စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် ကျယ်ပြန့် အသုံးချ တွင် ရေနံ, ဓာတု, ရေ ကုသမှု, shippတွင်g, စက္ကူ mတစ်ဦးkတွင်g, စွမ်းအား အပင်များ, heတစ်ဦးtတွင်g, buildတွင်g အလိုအလြောကျစကျတပျဆငျမှု နှင့် အခြား တွင်dustries.Double တံဆိပ်ခတ် ဖွဲ့စည်းပုံ ၏ အဆိုပါ wirတွင်g အခန်းထဲက။ အဆိုပါ တွင်ternတစ်ဦးl လျှပ်စစ် devices များ များမှာ အာမခံ သို့ ဖြစ် တွင် တစ်ဦး ဿုံ တံဆိပ်ခတ် ကာကွယ်မှု ဘယ်တော့လဲ အဆိုပါ တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် performတွင်g ထိုနေရာမှာပဲ တွင်stတစ်ဦးllတစ်ဦးtion နှင့် debuggတွင်g.AOX-M စီးရီး စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ပေး အဆိုပါ အများဆုံး reliတစ်ဦးble ဖြေရှင်းချက် သို့ sတစ်ဦးtဖြစ်fy ကျွန်တော်တို့၏ vတစ်ဦးluတစ်ဦးble cusသို့mers နှင့် ကျြောလှနျ expectတစ်ဦးtions.AOX လိမ့်မည် contတွင်ue သို့ တိုးတက် နောက်ထပ် တစ်ဦးdvတစ်ဦးnced ထုတ်ကုန် တွင်tegrတစ်ဦးtတွင်g မြင့်သော နည်းပညာ နှင့် ဖြစ် reတစ်ဦးdy အဆိုပါ အများဆုံး reliတစ်ဦးble ဖြေရှင်းချက်.
မာလ်တီအလှည့် actuator စက်တပ် AOX-M စီးရီးများအတွက် 1. မော်တော်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။
တိုက်ရိုက် torque လက်ငင်း 40 nm ကနေပိုးဂီယာအုံနဲ့ပေါင်းစပ်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator စက်တပ် 1000Nm.When AOX-M စီးရီးအထိ, အများဆုံး torque output ကို 50,000Nm မှတက်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
1. ရှိပါတယ်ကောင်းသောညှိနှိုင်းမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုသေချာဖို့ AOX-M စီးရီးစက်တပ်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator နှင့်ညှိနှိုင်းမှုယန္တရားအပေါငျးတို့သအဆစ်မှာအဘယ်သူမျှမဖြည်ရှင်းလင်းရေးဖြစ်သင့်, နှင့်ဆက်သွယ်မှုမူလီအညီအမျှနဲ့အချိုးကျတပ်ဆင်ခစဉ်အတွင်းတင်းကျပ်ရပါမည်။
မာလ်တီအလှည့် actuator စက်တပ် 2. AOX-M စီးရီးမကြာခဏထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။ မြင့်မားသောတုန်ခါမှုနှင့်အတူနေရာ, အမြဲ connectors ကောင်းသောအဆက်အသွယ်နှင့်သော့ခတ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရှိမရှိရှိမရှိ, အစွဲစေချောင်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
3. Pay ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစဉ်အတွင်းကိုင်တွယ်ရန်အာရုံစိုက်မှုနှင့်ထိခိုက်မှုကိုရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးပျက်စီးစေဖို့အတွက် actuator ယန္တရားမော်ဒယ်၏အလေးချိန်နှင့်အညီ load နှင့်ရြဖို့ forklift ကိုအသုံးပြုပါ။
4. ဒါဟာခြောက်သွေ့လေဝင်လေထွက်အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ရပါမည်။ မြေပြင်ကနေအစိုဓာတ်ကိုကျူးကျော်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ကကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းအပေါ်ထားရှိသို့မဟုတ်သစ်သားပျဉ်ပြားများကကွဲကွာရပါမည်။
AOX ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းကိုအလွန်အရေးပါမှုကိုအလေးထားမှာ, နှင့်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ၏ခိုင်ခံ့နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ AOX ပြည့်စုံဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးနှင့်အများအပြားနည်းပညာဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ AOX အဖွဲ့သည်လုံးဝ 98 utility ကိုမူပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့, ကြှနျုပျတို့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအပေါ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ multi အလှည့် actuator စက်တပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOX-M စီးရီးများအတွက်အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောအရည်အသွေးကိုစံထွက်သယ်ဆောင်မည်, ပြည်တွင်းတွင်တီထွင်ထုတ်ကုန်တန်ဖိုးထား, ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုလေးစား။
မေး: ငါတို့သည် AOX-M စီးရီးစက်တပ်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator အကြောင်းပြောဆိုရန် skype ကအပေါ်ကိုပဌနာနိုင်သလား?
A: ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ profeesional အင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ့က can.Having ကျနော်တို့အထူး AOX-M စီးရီး customaer တောင်းဆိုမှုများနှုန်းအဖြစ်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator စက်တပ်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ဘူး။
hot Tags:: စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်